UGordhan ubona abantu abamnyama befanelwe ukuhlahla umoba – Indodana kaZuma | News24
UGordhan ubona abantu abamnyama befanelwe ukuhlahla umoba – Indodana kaZuma
Cape Town – I-SAHRC izophenya ngokuphawula okunokucwasa ngokwebala okwenziwe yindodana kaMengameli Jacob Zuma, u-Edward, ekubhekise kulwo owayenguNgqongqoshe wezeziMali uPravin Gordhan kanye nowezokuVakasha uDerek Hanekom.
Encwadini evulelekile, u-Edward Zuma, ubhale ukuthi uHanekom “uyinja engenazwelo eyaqeqeshwa ukuba idephune isikhumba esimnyama,” kubika i-eNCA ngoLwesine.
Kuyo le ncwadi uphinde achaze uGordhan “njengomunye wamaqabane anenkohlakalo ukuwadlula wonke ku-ANC acabanga ukuthi abantu abamnyama ayikho into engcono abangayenza ngaphandle kokuhlahla umoba baphinde bathobele obasi abafana naye.”
OLUNYE UDABA: Sizobuvikela ngakho konke ubuholi be-ANC- Edward Zuma
ISA Human Rights Commission ithe okuqukethwe yile ncwadi, ikakhulukazi izitatimende ezigqugquzela inzondo yobuhlanga, akwehli kahle futhi kuphambana nelungelo elikuMthethosisekelo lokukhuluma ngokukhululeka.
I-SAHRC ithe izophenya kulandela ukuvela kwale ncwadi.
NgoLwesithathu ebusuku, u-Edward waphinde wagxeka uGordhan noHanekom ebabiza “ngezimpimpi”.
Bobabili laba baphakamisa ukuthi uMengameli Zuma ehle esikhundleni, lapho uGordhan akhuluma khona “ngosopolitiki abanenkohlakalo”, ebhekise kuZuma.
Ngemuva kwalokhu, i-ANC KwaZulu-Natal iziqhelelanisile nokuphawula kuka-Edward.